व्यापार साइटहरूको लागि सर्वश्रेष्ठ WordPress प्लगइनहरू Martech Zone
केहि वर्डप्रेस प्लगइन लोकप्रियता व्यक्तिगत वा उपभोक्ता-आधारित स्थापनाहरू द्वारा संचालित गरिएको छ। व्यापारको बारेमा के हो? हामीले हाम्रो सूची सँगै राखेका छौं मनपर्ने वर्डप्रेस प्लगइन हामी विश्वास गर्छौं कि व्यापार प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको सामग्रीमा क्यापिटलाइज गर्न र खोज इन्जिनहरू र सोशल मिडिया, मोबाइल, ट्याब्लेट वा डेस्कटप मार्फत परिणामहरू ड्राइभ गर्न सक्षम बनाउनुहोस् र उनीहरूको सामाजिक र भिडियो रणनीतिहरू पूर्ण रूपमा एकीकृत गर्नुहोस्।
केहि लोकप्रिय वर्डप्रेस प्लगइनहरू विकास गरिसकेपछि, म सधैं प्लगइनहरू फेला पार्न र साझेदारी गर्न उत्साहित छु जसले WordPress भित्र कार्यहरू बृद्धि गर्न, अप्टिमाइज गर्न र स्वचालित गर्न अद्भुत काम गर्दछ। WordPress प्लगइनहरू आशिष् र अभिशाप हुन्, यद्यपि।
WordPress प्लगइन मुद्दाहरू
प्लगइनहरू कहिलेकाँही छोडिन्छन् सुरक्षा प्वाल त्यो ह्याकरहरूले तपाईंको साइटमा मालवेयर धकेल्नको लागि फाइदा लिन सक्दछन्।
प्लगइनहरू प्राय: पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्दैनन् WordPress कोडिंग मापदण्डहरूथप गर्दै अनावश्यक कोड जसले अन्य मुद्दाहरूलाई निम्त्याउन सक्छ।
प्लगइनहरू प्राय: हुन्छन् खराब विकसित, आन्तरिक डेटा वा प्रदर्शन मुद्दाहरूको कारण।
प्लगइनहरू प्राय: हुन्छन् मेला खाएन, कोडमा निर्भरताको साथ छोड्दै जुन तपाइँको मिति नाघी पनी बढ्न सक्छ र तपाइँको साइट बेकार प्रस्तुत गर्दछ।
प्लगइनहरूले धेरै धेरै छोड्न सक्छ तपाईको डेटाबेसमा डाटा... तपाईंले प्लगइन स्थापना हटाए पछि पनि। विकासकर्ताहरूले यसलाई सच्याउन सक्छन्, तर प्रायः यसको चिन्ता नलिनुहोस्।
म विश्वास गर्दछु कि WordPress ले वास्तवमै माथि गएको छ, पुरानो प्लगइनहरू तिनीहरूको प्लगइन भण्डारमा अवलोकनबाट म्याद सकिन्छ र नयाँ प्लगइनहरू म्यानुअली स्वीकृत गर्दै छन् कि उनीहरू खराब लेखिएका छैनन्। जहाँबाट सेल्फ-होस्ट गरिएको वर्डप्रेस ईन्स्ट्यान्सले तपाईंलाई कुनै पनि प्लगइन स्थापना गर्न अनुमति दिन्छ, यद्यपि तपाईंले आफ्नो गृहकार्य गर्नुपर्दछ वा सिफारिशहरू गर्नको लागि विश्वासनीय स्रोत प्राप्त गर्नुपर्दछ।
थप रूपमा, धेरै सर्वश्रेष्ठ वर्डप्रेस प्लगइन्स सूची व्यक्तिगत ब्लगरको अनुरूप बनाइएका छन् र वास्तवमा व्यवसायहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दैनन् र सामग्री रणनीतिहरू डिजाइन र विकास गर्नमा तिनीहरूको अद्वितीय प्रयासहरू जसले तिनीहरूको व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गर्दछ। साथै, हामी सबैलाई थाहा छ सबै भन्दा राम्रो एक व्यक्तिपरक शब्द हो... त्यसैले हामी हाम्रा सिफारिसहरू फरक गर्न मनपर्नेसँग जाँदैछौं।
तल को एक प्रयास र सत्य सेट छ व्यवसायका लागि WordPress प्लगइनहरू हामी विश्वास गर्छौं कि WordPress प्लगइनहरूको विशाल परिदृश्यमा सबै भन्दा राम्रो हो।
मनपर्ने WordPress प्लगइनहरू संलग्न हुन र आगन्तुकहरूलाई रूपान्तरण गर्न
EventON - यदि तपाईं सजिलैसँग घटनाहरू, दर्ता, तपाईंको WordPress साइटमा बहु स्थानहरूमा थप्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, यो प्लगइन दुबै राम्रोसँग समर्थित छ र यसका धेरै सुविधाहरू छन्।
गुरुत्वाकर्षण फारम - PayPal जस्ता तेस्रो-पक्ष सेवाहरूसँग सजिलैसँग एकीकृत विभिन्न कन्फिगरेसन विकल्पहरूको साथ द्रुत र सजिलो फारम-निर्माण, MailChimp, AWeber, र अन्य। एड-अनहरू र एपीआई परिष्कृत कार्यक्षमताका लागि उपलब्ध छन्। यदि तपाइँ प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ एलिमेन्टर प्रो, तपाइँलाई यसको आवश्यकता छैन किनकि फारमहरु यसको एक विशेषता हो।
OptinMonster - ध्यान आकर्षित गर्ने अप्ट-इन फारमहरू सिर्जना गर्नुहोस् जुन आगन्तुकलाई ग्राहकहरू र ग्राहकहरूमा बदल्छन्। पपअपहरू, फ्लोटिंग फुटर बारहरू, स्लाइड-इनहरू, र अन्यबाट छनौट गर्नुहोस् opt० सेकेन्डको फ्ल्याटमा तपाईंको अप्ट-इन फारम सिर्जना गर्न।
jetpack - जेटप्याक दुबै नि: शुल्क र भुक्तान गरिएको संस्करणहरूको साथ सुधार गर्न जारी छ जुन तपाईंको WordPress साइटको क्षमताहरू विस्तार गर्दछ। मलाई लाग्छ दुई मुख्य सुविधाहरू सामाजिक साझेदारी क्षमता हो र ईमेल संवर्द्धन मार्फत सदस्यता। त्यहाँ अन्य सुविधाहरूको एक टन छन्, यद्यपि! सबै भन्दा राम्रो, यो प्लगइन Automattic द्वारा विकसित गरिएको छ ताकि तपाईंलाई थाहा छ कि यो लेखिएको छ र उच्च स्तरमा कायम राखिएको छ।
WooCommerce - एक अनलाइन स्टोर निर्माण को लागी सबै भन्दा लोकप्रिय ईकामर्स प्लेटफार्म। वूकोमर्स पूर्ण रूपले स्वचालित, वर्डप्रेसको विकासकर्ताहरूमा टोली द्वारा एक टन संवर्द्धन र प्लगइनहरूको साथ समर्थित छ।
मनपर्ने WordPress प्लगइनहरू तपाइँको WordPress प्रशासन बृद्धि गर्न
उत्तम खोज प्रतिस्थापन - त्यहाँ समयहरू हुन्छ जब तपाईले सामग्री, लिंक, वा अन्य सेटि forहरूको लागि डेटाबेसमा खोजी / बदल्नु पर्ने आवश्यकता हुन्छ। यो प्लगइन त्यो गर्नका लागि एक उत्तम विकल्प हो।
टिप्पणी अक्षम गर्नुहोस् - टिप्पणीहरू खोज रैंकिङहरू र तपाईंको साइटका आगन्तुकहरूलाई संलग्न गर्न दुवैको लागि ठूलो फाइदाको रूपमा प्रयोग गरियो; यद्यपि, हालैका वर्षहरूमा स्प्यामिङ टिप्पणीहरू लगभग अव्यवस्थित भएका छन् र कुराकानी सोशल मिडिया च्यानलहरूमा सरेको छ। यो प्लगइनले टिप्पणी-सम्बन्धित सबै सुविधाहरू असक्षम पार्नेछ र तपाईंको साइटमा प्रकाशित हुनबाट टिप्पणी सेक्सनहरू हटाउनेछ। तपाईंले प्रकाशित गरिएका सबै टिप्पणीहरू मेटाउन पनि सक्नुहुन्छ।
डुप्लिकेट पोष्ट - यदि तपाइँ कहिल्यै तपाइँको सामग्री नक्कल गर्न को लागी आवश्यक छ, यो प्लगइन कुन भूमिकाहरु सामग्री नक्कल गर्न सक्नुहुन्छ, कुन तत्वहरु दोहोरिएका छन्, र अधिक मा सीमित नियन्त्रण प्रदान गर्दछ।
WordPress का लागि गुगल ट्याग प्रबन्धक - गुगल ट्याग प्रबन्धकबाट तपाईंको सबै अतिरिक्त स्क्रिप्ट र अन्य कार्यहरू प्रबन्ध गर्नुहोस्। यो प्लगइन WordPress मा विशिष्ट छ र विकल्पको एक टन प्रदान गर्दछ।
पोष्ट सूची चित्रित चित्र - थप गर्दछ चित्रित छवि व्यवस्थापक पोष्ट र पृष्ठ सूचीमा स्तम्भ। यसले प्रशासकहरूलाई कुन पोष्ट वा पृष्ठहरूमा चित्रित छवि सेट भएको हेर्न दिन्छ।
द्रुत ड्राफ्ट पहुँच - तपाईं धेरै ड्राफ्टहरू प्रबन्ध गर्दै हुनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने, यो प्लगइनले तपाईंको व्यवस्थापक मेनूमा एक उत्कृष्ट सर्टकट राख्दछ जुन तपाईंलाई तपाईंको ड्राफ्टमा सिधा ल्याउँदछ (साथै गणनालाई पनि प्रदर्शन गर्दछ)।
गुगल द्वारा साइट किट - लगत, व्यवस्थापन, र वेबमा साइटलाई सफल बनाउन महत्वपूर्ण गुगल उपकरणहरूबाट अन्तर्दृष्टि प्राप्त गर्नका लागि एक एकल समाधान। यो आधिकारिक प्रदान गर्दछ, अप-टु-डेट अंतर्दृष्टि धेरै गुगल उत्पादहरूबाट सीधा वर्डप्रेस ड्यासबोर्डमा सजिलो पहुँचको लागि, सबै नि: शुल्कको लागि।
पासवर्ड बिना अस्थायी लगइन - त्यहाँ समयहरू छन् जुन तपाइँ तपाइँको WordPress उदाहरणमा अस्थायी पहुँचको साथ एक थिम वा प्लगइन विकासकर्ता प्रदान गर्न चाहानुहुन्छ ... तर तपाइँ तिनीहरूलाई दर्ता गर्न र ईमेल मार्फत पासवर्डहरू प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा जान सक्नुहुन्न। यो प्लगइनले तपाइँलाई सहयोग गर्न तपाइँको साइटमा लग इन गर्न प्रयोग गर्न सक्ने प्रत्यक्ष, अस्थायी लिङ्क प्रदान गर्दछ। तपाईं पनि म्याद सकिने समय सेट गर्न सक्षम हुनुहुन्छ।
WP मेल लग - यदि तपाइँ कहिल्यै सोच्नुभएको छ कि ईमेलहरु PHP वा SMTP को माध्यम बाट तपाइँको साइट बाट बाहिर पठाइएको छ, WP मेल लग तपाइँको आउटबाउन्ड सन्देश ट्र्याक गर्न एक महत्वपूर्ण प्लगइन हो।
WP सबै आयात - WordPress मा र बाहिर XML र CSV फाईलहरू र धेरै लोकप्रिय प्लगइनहरूबाट डाटा आयात र निर्यात गर्न प्लगइनहरूको अविश्वसनीय रूपमा लचिलो संग्रह।
लेआउट र सम्पादनको लागि मनपर्ने WordPress प्लगइनहरू
गुटेनबर्गका लागि उन्नत रिच टेक्स्ट उपकरणहरू - यदि तपाईंलाई वर्डप्रेसको साथ पूर्वनिर्धारित गुटेनबर्ग सम्पादकमा कोड, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, इनलाइन पाठ, र पृष्ठभूमि रङ सम्पादन सहित केही थप स्टाइल चाहिन्छ भने... यो सरल प्लगइनले सबै क्षमताहरू प्रदान गर्दछ।
एलिमेन्टर प्रो - वर्डप्रेस को लागी देशी सम्पादक को लागी धेरै चाहिएको छ र धेरै निराशाजनक हुन सक्छ। Elementor एक शानदार WYSIWYG सम्पादक, फारम, एकीकरण, लेआउट, टेम्प्लेट, र धेरै अन्य प्लगइनहरु संग विस्तार गर्न को लागी अन्य विकल्पहरु को दर्जनों संग उमेर को आउनुभएको छ। म पक्का छु मँ कहिल्यै यो बिना एक साइट निर्माण हुनेछ!
तपाईंको सामग्री र यसको पहुँचलाई पावर अप गर्न मनपर्ने WordPress प्लगइनहरू
उन्नत कस्टम फिल्डहरू - प्रशासकहरू, लेखकहरू र सम्पादकहरूको लागि तपाईंको वेबसाइटलाई यसको प्रशासनलाई सरलीकृत गरी अनुकूलित गर्न सजिलो बनाउनुहोस्। ACF लागू गर्न को लागी सरल र अत्यधिक अनुकूलन योग्य छ। केहि अविश्वसनीय सुविधाहरूको लागि अतिरिक्त इजाजतपत्र प्राप्त अन-खरीदहरू।
ARVE उन्नत उत्तरदायी वीडियो इम्बेडर - इम्बेडेड भिडियोहरू तपाइँको साइटमा उत्तरदायी लेआउटहरू कायम राख्नका लागि एक दुःस्वप्न हुन सक्छ। WordPress मूल गरी दर्जनौं प्लेटफार्महरू सम्मिलित गर्दछ, तर तिनीहरू उत्तरदायी छन् भनेर निश्चित गर्दैन।
सजिलो WP SMTP - तपाइँको होस्टिंग प्रदायक बाट वर्डप्रेस अधिसूचनाहरु, सतर्कताहरु, र स्वचालित ईमेलहरु पठाउँदै समस्या को लागी सोध्दै छ। SMTP को प्रयोग गरी तपाइँको अधिकृत सेवा प्रदायक को माध्यम बाट एक ईमेल पठाउन कहीं धेरै सुरक्षित छ र डेलिभर गर्ने को एक उच्च संभावना हुनेछ। हामी कसरी यो को लागी सेट अप गर्न को लागी लेख छ गुगल or माइक्रोसफ्ट.
फिडप्रेस - फिडप्रेसले स्वत: फिड रीडायरेक्शनहरू ह्यान्डल गर्दछ र तपाईंको फिडलाई वास्तविक समयमा तपाईंको फिड अपडेट गर्दछ प्रत्येक पटक तपाईंले नयाँ पोस्ट प्रकाशित गर्दा।
वनसिग्नल - मोबाइल पुश, वेब पुश, ईमेल, र in-app सन्देशहरू। प्रत्येक पोष्ट प्रकाशित भएको साथ सदस्यहरुलाई सूचित गर्नुहोस्।
पोडकास्ट फिड प्लेयर विजेट - यो एक विजेट हो जुन मैले व्यक्तिगत रूपमा विकास गरेको छु जुन एकदम लोकप्रिय छ। यदि तपाईं आफ्नो पोडकास्ट कतै होस्टिंग गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं फिड प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको पोडकास्ट तपाईंको साइडबारमा प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ वा पृष्ठ वा पोष्टमा शोर्टकोड प्रयोग गरेर। यसले WordPress 'नेटिभ HTML अडियो प्लेयर प्रयोग गर्दछ।
GTranslate - यो प्लगइन र सेवा प्रयोग गर्नुहोस् स्वचालित रूपमा तपाईंको सामग्री अनुवाद गर्न र तपाईंको WordPress साइटलाई अनुकूलन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय खोजी पहुँचको लागि।
एप्पल समाचारमा प्रकाशित गर्नुहोस् - तपाईंको एप्पल न्यूज च्यानलमा प्रकाशित गर्न तपाईंको वर्डप्रेस ब्लग सामग्री सक्षम गर्दछ।
हालै - केहि महान आन्तरिक लिंकहरू र स engage्लग्नता प्रदान गर्न तपाईंको सबैभन्दा भर्खरको सामग्रीको साथ तपाईंको फुटरमा विजेट थप्नुहोस्। यो प्लगइनसँग डिजाइन अनुकूलन विकल्पहरूको एक टन छ।
पुरानो पोस्टहरू पुनर्स्थापना गर्नुहोस् - किन तपाईं एक पटक तपाईंको सामग्री साझा गर्नुहुन्छ जब तपाईं उत्कृष्ट सामग्री बारम्बार साझेदारी गर्दै हुनुहुन्छ ... सवारी चालकता र तपाईंको सामग्रीको लगानी अनुभूति गर्दै?
WordPress लोकप्रिय पोस्टहरू - ती पदहरू र पृष्ठहरूमा गति राख्न तपाईंको सबैभन्दा लोकप्रिय सामग्रीको साथ तपाईंको फुटरमा विजेट थप्नुहोस्। यो प्लगइन हालै एक समान लेखक द्वारा बनाइएको थियो, र केहि जानको लागि भित्र निर्मित टेम्पलेट्स तयार छ!
WP पीडीएफ - वर्डप्रेसमा सजीलो मोबाइल मैत्री PDF हरू - र तपाईंको दर्शकहरूलाई तपाईंको मूल फाइलहरू डाउनलोड वा प्रिन्ट गर्नबाट रोक्नुहोस्।
WP प्रयोगकर्ता अवतार - वर्डप्रेसले हाल तपाईलाई कस्टम अवतारहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ जुन मार्फत अपलोड गरियो Gravatar। WP प्रयोगकर्ता अवतारले तपाइँलाई तपाइँको मिडिया लाइब्रेरीमा अपलोड गरिएको कुनै पनि फोटो अवतारको रूपमा प्रयोग गर्न सक्षम गर्दछ।
मनपर्ने WordPress प्लगइनहरू तपाइँको WordPress साइट अनुकूलन गर्न
क्राकेन छवि अनुकूलक - उडानमा छविहरू र थम्बनेलहरू अनुकूलन गर्दछ, तपाईंलाई कम छवि आकार र गुण नलगाईकन लोड गर्ने समयहरू कम गर्न सक्षम गर्दछ।
StackPath CDN - द्रुत पृष्ठ लोड समय, उत्तम Google र्याकिंग, र StackPath CDN का साथ अधिक रूपान्तरण प्राप्त गर्नुहोस्। सेटअप सरल छ र केहि मिनेट लाग्छ।
एसईओ वर्डप्रेस -श्रेणी गणित एक हल्का एसईओ प्लगइन हो कि पृष्ठ मा सामग्री विश्लेषण, XML साइट नक्शा, रिच स्निपेट्स, पुनर्निर्देशन, ४०४ अनुगमन, र एक टन अधिक सुविधाहरु समावेश छ। प्रो संस्करण धनी टुक्राहरु, बहु स्थान, र अधिक को लागी अविश्वसनीय समर्थन छ। सबै भन्दा राम्रो, कोड अविश्वसनीय राम्रो तरिकाले लेखिएको छ र तपाइँको साइट लाई अन्य WordPress SEO प्लगइनहरु को रूप मा धेरै ढिलो गर्दैन।
WP रकेट - केही क्लिकमा वर्डप्रेस लोड छिटो बनाउनुहोस्। यो WordPress विशेषज्ञहरु द्वारा सबैभन्दा शक्तिशाली क्याचिंग प्लगइनको रूपमा मान्यता प्राप्त छ।
कुकी र डाटा अनुपालनको लागि मनपर्ने WordPress प्लगइन
एक व्यवसायको रूपमा, तपाइँ अन्तर्राष्ट्रिय, संघीय, र राज्य नियमहरूको पालना गर्न आवश्यक छ जसले तपाइँ कसरी तपाइँको आगन्तुकहरूको डेटा ट्र्याक र राख्नुहुन्छ भन्ने नियमहरू पालन गर्दछ। म कुकी अनुमतिहरूको लागि Jetpack विजेट को उपयोग गर्दै थिए, तर यो प्राय एक पटक भन्दा बढी लोड भयो र कुनै अनुकूलन विकल्पहरू थिएन।
GDPR कुकी सहमति (CCPA तैयार) - GDPR कुकी सम्मति प्लगइनले तपाईंलाई तपाईंको वेबसाइट GDPR (RGPD, DSVGO) अनुरूप बनाउन मद्दत गर्दछ। यस GDPR WordPress प्लगइनसँग अनुपालनको साथै ब्राजिलको LGPD र क्यालिफोर्निया उपभोक्ता प्राइभेसी ऐन (CCPA) को अनुरूप कुकी अनुपालन पनि समर्थन गर्दछ जुन क्यालिफोर्नियाका बासिन्दाहरूको लागि गोपनीयता अधिकार र उपभोक्ता संरक्षण अभिवृद्धि गर्नका लागि राज्य कानून हो।
तपाईंको WordPress साइट सुरक्षित गर्न मनपर्ने WordPress प्लगइनहरू
Akismet - WordPress 'सबै भन्दा लोकप्रिय प्लगइन, Akismet संभवतः संसारमा सबै भन्दा राम्रो तरीका हो टिप्पणी र ट्र्याकब्याक स्प्यामबाट तपाईंको ब्लग रक्षा गर्न। केवल यसलाई स्थापना नगर्नुहोस्, ती हाँगाहरू रिपोर्ट गर्नुहोस्!
VaultPress - तपाईंको सामग्री, विषयवस्तु, प्लगइनहरू, र सेटिङहरू वास्तविक-समय ब्याकअप र स्वचालित सुरक्षा स्क्यानिङको साथ सुरक्षित गर्नुहोस्।
WP गतिविधि लग - प्रयोगकर्ता परिवर्तनहरूको रेकर्ड राख्नको लागि सबैभन्दा व्यापक WordPress गतिविधि लग प्लगइन, समस्या निवारण सजिलो बनाउन, र मालिसियस ह्याकहरूलाई रोक्नको लागि चाँडै शंकास्पद व्यवहार पहिचान गर्न। यदि तपाईंले सदस्यता लिनुभयो भने Jetpack सुरक्षा or Jetpack व्यावसायिक तपाईले एक व्यापक गतिविधि लग पनि पाउनुहुनेछ।
थप प्लगइनहरू चाहिन्छ?
त्यहाँ केहि उत्कृष्ट, सशुल्क प्लगइनहरू छन् जुन पूर्ण रूपमा समर्थित छ थीमफोरस्ट तपाईं अरू कहिँ भेट्टाउनु हुन्न। प्यारेन्ट कम्पनी, एन्भाटोले प्लगइनहरू समर्थित र प्राय: अपडेट गरिएको सुनिश्चित गर्ने उत्तम कार्य गर्दछ।
खुलासा: म प्रयोग गर्दैछु सम्बद्ध कोडहरू यस पोष्ट भर मा, कृपया क्लिक गरेर र तिनीहरूलाई खरीद गरेर मेरो प्रकाशन समर्थन गर्नुहोस्!
टैग: Akismetउत्तम प्लगइनहरूसबै भन्दा राम्रो WordPress प्लगइनव्यापार WordPress प्लगइनहरूccpaCDNअनुपालन प्लगइनकुकीज नीतिनक्कली पोस्टमनपर्ने प्लगइनहरूमनपर्ने WordPress प्लगइनहरूGDPRगुगल साइट किटगुटेनबर्गपोडकास्ट प्लेयरPubSubHubbubद्रुत ड्राफ्ट पहुँचश्रेणी गणितपुनप्रेषणरिच टेक्स्ट सम्पादनस्ट्याकपाथविजेट प्लगइनहरूविजेटWordPressवर्डप्रेस अडिट लगWordPress बैकअप प्लगइनWordPress cdnWordPress cdn प्लगइनवर्डप्रेस ईकामर्स प्लगइनWordPress फार्म प्लगइनवर्डप्रेस प्लगइनहरूWordPress पोडकास्ट प्लगइनवर्डप्रेस एसएमटीपी प्लगइनWordPress सामाजिक शेयर प्लगइनwp रकेट
जनवरी 5, 2015 11:21 बजे
महान सूची र इन्फोग्राफिक। सामान्य रूपमा, केही पुराना, परिचित मनपर्नेहरू र केही नयाँहरू मैले चेक-आउट गर्न जाँदैछु! बाडेको मा धन्यवाद।
जनवरी 6, 2015 1:53 बजे
जुन 28, 2015 मा 11: 34 PM
मलाई थाहा छैन तपाईं कसरी भन्न सक्नुहुन्छ कि यो पृष्ठ मध्ये कुनै पनि पढ्न योग्य छ? मैले केहि पढ्नको लागि आधा तल स्क्रोल गर्नुपर्‍यो र त्यसपछि यो यसको लायक थिएन। यदि तपाईलाई चम्किलो रङका बटनहरूको 3/4 पृष्ठ साइडबार र मलाई कष्टप्रद बनाउने पप अप व्यापार मार्केटिङ हो भन्ने सोच्नुहुन्छ भने, तपाईंले यसलाई गुमाउनुभएको छ। मैले तपाईसँग केहि साझा गर्नको लागि मात्र यो लेखेको छु, तपाई मसँग हुनुहुन्छ। र त्यो CUT to the CHASE हो। म सायद पुरानो विद्यालय र वेबसाइट टेक्नोलोजी पक्कै गति मा चलिरहेको छ। तर पक्कै पनि मार्केटिङ व्यापार सम्पर्क निर्माण र आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी मा जानकारी जुटाउने बारेमा अझै पनि छ? यदि तपाईका अधिकांश पाठकहरू रंगविहीन छन् भने मलाई अचम्म लाग्दैन। म पक्कै पनि त्यही बाटो जाँदैछु।
जुन 29, 2015 मा 12: 31 PM
प्रतिक्रियाको लागि धन्यवाद, स्टीव। हामी तपाईलाई कुनै शुल्क नलिई यहाँ सामग्री आपूर्ति गर्छौं र हाम्रा पाठकहरू धेरै वर्षदेखि दोहोरो अंकमा छन्। म हाम्रा फ्यानहरू, हाम्रा विज्ञापनदाताहरू, र हाम्रा प्रायोजकहरूको दिशामा काम गर्न जारी राख्न इच्छुक छु। हार्दिक शुभकामना।
नमस्ते डगलस! तपाईंसँग यहाँ छ रोचक ब्लग। ठूलो मद्दत। धन्यवाद।
धन्यवाद! र तपाईलाई स्वागत छ!